Tranga voajanahary :: Nihetsika ny tany teto Antananarivo • AoRaha
Tranga voajanahary Nihetsika ny tany teto Antananarivo
Nisehoana horohontany teto an-drenivohitra, afak’omaly alina. Faritra maro no nahare izany, toy ny teny Mandroseza, Ampitatafika ary Ankadifotsy sy ny hafa. Tamin’ny iraika ambin’ny folo ora sy sasany alina no nisehoan’ity horohorontany ity, raha ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra eny amin’ny Sampana mpamantatra ny any ambanin’ny tany, eny amin’ny Oniversiten’ Antananarivo na ny Ioga.
Nahatratra 4,8 tamin’ny mari-drefy richter ny fihetsehana, araka ny fanampim-panazavana. Tany Paraky, atsimon’i Soavinandriana, andrefan’ny kaominina Miandrarivo Faratsiho kosa no nisy ny foibeny ary manodidina ny 240 segondra ny faharetany. Fotoana vitsy tokoa no nampihovitra ny tany ka maro ireo tsy nahare izany. Toran-kovitra noho ny tahotra kosa ireo ampahany nandre.
“Efa natory aho no reko nihovitrovitra be ny latabatray sy ny varavarana hatramin’ ny trano ary noheveriko fa nisy mpangalatra nikasa hiditra mihitsy tato aminay. Fotoana vitsivitsy taorian’ izay aho vao tonga saina fa hay horohorontany indray no niseho”, hoy i Lisy, mponina iray eny Ankadifotsy.
“Azo lazaina ho antonony ihany ny hamafin’iny fihovitry ny tany iny. Henon’ny olona sasany ny fisiany, saingy tsy mbola manimba entana”, hoy iry tompon’andraikitry ny Ioga iry. Nambarany ihany koa fa misy horohorontany foana isan’andro saingy tsy misy mahare satria kely ny heriny.
Fahapoizinana ara-tsakafo :: Olona iray maty, roapolo hafa narary nandritra ny mariazy
Fotodrafitrasa Ambilobe-Vohemar :: Natomboka ny sabotsy teo ny asa fanamboaran-dalana